Homeराष्ट्रिय खबरनेकपाका विद्यार्थी नेताको आ,पत्तिजनक भाषा : बाबुरामलाई श्र,द्धाञ्जली !
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका संयोजक हुन् ऐन महर । नेकपामाथि आस्था राख्ने लाखौ विद्यार्थीका नेता उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डा बाबुराम भट्टराईविरुद्ध आ,पत्तिजनक भाषा प्रयोग गर्दै गा,ली गरेका छन् ।
पटक पटक सामाजिक सञ्जाल र अन्य औपचारिक कार्यक्रममा समेत विपक्षीप्रति तल्लोस्तरको भाषाशैलीका साथ आ,लोचनामा उत्रिने उनले पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईलाई श्र,द्धाञ्जली दिएका छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भट्टराईको आ,लोचना गर्दै श्र,द्धाञ्जली दिएका हुन् । ‘धेरै पढे विद्धान हुन्छ, विद्धान बिग्रे बाबुराम हुन्छ भन्थे पुष्टि हुँदैछ। यी ग,द्दार द,लाल राष्ट्र,घातीलाई हार्दिक श्र,द्धाञ्जली !’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
बाबुरामलाई यसरी आ,पत्तिजनक टिप्पणी गरेपछि धेरैले महरको आ,लोचना गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । अत्यधिक आ,लोचना भएपछि उनले आफ्नो फेसबुकमा अभिव्यक्ति सच्याएका त छन् तर उनको बौद्धिकता र चेतना स्तरमाथि भने टिप्पणी गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।
भट्टराईले शनिबार बिहान कोरोनावि,रुद्धको ल,डाइमा सरकारले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको आशयसहित टिप्पणी गरेका थिए । उनले नेकपाभित्र ओली समूहमा विवेकहीन मान्छे भएको भन्दै लाखौ श्र मिकले दुः ख पाएर स्वदेश फर्किँदा कोरोनाको प रीक्षण समेत हुन नसकेको बताएका थिए ।
‘नेकपाको ओली गुटभित्र विवेक भएका मान्छे बाँकी छैनन् ? विदेशमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक स्वदेश फर्किरहेछन्, तिनको परीक्षण, व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। अरिङ्गाल सेनालाई प्रतिपक्षीको खेदो खन्नु सट्टा मौरी सेनामा बदलेर कोरोना वि रूद्ध ल डाईँमा लाउन सकिन्न ? मान्छे नरहे पहाड मात्रले राष्ट्र बन्ला ?’
अमेरिकाले चीनमाथि गर्दैछ अर्को ठूलो का’रवाही
generic tadalafil 20mg – buy tadalafil online reddit generic tadalafil
propecia testosterone levels – http://finasteridepls.com/ propecia hair growth
finasteride results – http://propechl.com/ propecia results after3months
Wuldxd – http://virviaga.com/ generic viagra pills
Aowshh – ivermectin uk Kzcwnk bsucst